शोनब्रुन भियनाको चिडियाखाना, घर पनि भएको छ 500 जनावरहरूको प्रजाति, देखि 1752. उदाहरण को रुपमा, युरोपको सब भन्दा पुरानो चिडियाखाना अफ्रिकी हात्ती र विशाल पांडाको घर छ. को 42 भियानिज चिडियाखाना को एक एकर दरबार भित्र स्थित छ र बच्चाहरु र आमाबाबु को लागी केहि आश्चर्यजनक आकर्षणहरु छन्.
उदाहरणका लागि, चिडियाखानामा वर्षावन घर गर्जनको साथ वास्तविक वर्षावनको भयानक मानव निर्मित प्रतिकृति हो।. एशियाई साना-नौंजा ओट्टर र भ्याम्पायर केकाहरूको लागि आँखा बाहिर राख्न तपाईं वरिपरि घुम्नुहुन्छ. साथै, ध्रुवीय भालु घर, बाघ र चीता, कोआला घर, र अधिक धेरै घरहरू अद्भुत जनावरहरू तिम्रो लागि प्रतीक्षा गर्दै.
लुभावो मा अवस्थित टायरोल अष्ट्रिया मा, ईन्स्ब्रकमा अल्पाइन चिडियाखाना भन्दा बढि घर छ 150 पशु प्रजाति. तपाईंले यो अद्भुत चिडियाखाना अस्ट्रियन आल्प्सको नोर्डकेट पर्वतीय श्रृंखलाको फेदमा पाउनुहुनेछ. त्यसैले, यदि तपाईं आल्प्समा परिवार यात्राको योजना गर्दै हुनुहुन्छ, निश्चित गर्नुहोस् अल्पेन्जु इन्सब्रकका लागि समय.
जर्मनीको सब भन्दा पुरानो चिडियाखाना संसारमा केही असाधारण जनावरहरूको घर छ. चिली फ्लेमिing्गो र अफ्रिकी पेन्गुइन बर्लिन चिडियाखानामा तपाईको परिवार भ्रमणमा भेट्ने केही विशेष बासिन्दाहरू हुन्।. दुर्लभ र विदेशी जनावरहरूले बर्लिनलाई युरोपमा तपाईंको बच्चाहरूको साथ हेर्नका लागि एउटा उत्तम चिड़ियाघर बनाउँदछ.
यस चिडियाखानाको बारेमा सबै भन्दा राम्रो चीजहरू त्यहाँ छन् विशेष टिकट मूल्य साना वा ठूला परिवारका लागि, चिडियाखाना को लागी एक एकल प्रविष्टि, वा एक्वैरियम को प्रवेश संग एक कम्बो.
ह्याम्बर्ग एक महान छ शहर ब्रेक गन्तव्य, र बच्चाहरु संग भेट्न एक रमाईलो शहर. ह्याम्बर्ग मा Hagenbeck Tierpark बच्चाहरु संग ह्याम्बर्ग मा गर्न को लागी एक रमाईलो चीज को एक उदाहरण हो. यो युरोप र जर्मनीको चिडियाखाना मध्ये एउटा हो. भन्दा बढि खुला खुला घर 1,800 जनावर, यो शानदार चिडियाखानामा आर्कटिक महासागर छ. आर्कटिक महासागर त्यहाँ छ जहाँ तपाईं एक पारिवारिक साहसिक कार्य शुरू गर्नुहुन्छ, र ध्रुवीय भालुको भ्रमण गर्नुहोस्, पेंगुइनहरू, र समुद्री भालु.
बेल्जियम मा सबै भन्दा राम्रो चिडियाघर धेरै बर्षहरुमा धेरै विस्तार भएको छ. चिडियाखाना यति धेरै बढेको छ कि यो शहरको बीचमा छैन, केन्द्रीय स्टेशन को धेरै निकट. यसबाहेक, चिडियाखानाको स्काईवाकले सबैभन्दा धेरै प्रकट गर्दछ लुभावो दृश्य दृश्य बगैंचा र एक को युरोपमा अफ-द पिट्ने-पथ शहरहरू.
जंगली समुद्री सिंह र जंगली बिरालाहरू, Carreabean फ्लेमिंगो, र विशाल कछुए, तपाईंले भेट्नु हुने विशेष जनावरहरू हुन्. यो अद्भुत चिडियाखाना फ्रान्सको नयाँ अक्वीटाइन क्षेत्रमा अवस्थित छ, एट्लान्टिक तटमा, बाट एक महान साहसिक पेरिस ट्रेन द्वारा.
अर्को अचम्मको कुरा जुन बासेल चिडियाखाना हाम्रो मा राख्छ 10 युरोपमा सर्वश्रेष्ठ चिडियाखाना, बच्चाहरूको चिड़ियाघर हो. यहाँ तपाइँका बच्चाहरु को लागी एक बिच अमूल्य अवसर को लागी संसार भर बाट घरेलू पशुहरु को लागी प्राप्त हुनेछ, तिनीहरूलाई पाल्नुहोस्, र तिनीहरूलाई खुवाउनुहोस्.
चिडियाखानाको भ्रमण सम्पूर्ण परिवारका लागि अद्भुत बाहिरी गतिविधि हो. हरियो बगैंचा र वन, असाधारण जनावर र बोटबिरुवा, बच्चाहरूलाई आकर्षित र मनोरन्जन गर्दछ. को 10 युरोपमा सर्वश्रेष्ठ चिडियाखाना तपाईंको बच्चाहरूको साथ भ्रमण गर्न, यूरोपको लुकेका रत्नहरू हुन् र कम्तिमा पूरा दिन-यात्राको लागि योग्य छन्.
के तपाइँ हाम्रो ब्ल्ग पोष्ट एम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ "१० युरोपमा तपाइँका बच्चाहरु संग भेट गर्नको लागि १० सर्वश्रेष्ठ चिडियाखाना" तपाईको साइटमा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/best-zoos-visit-kids-europe/?lang=ne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
साहस	BestzoosEurope	यूरोप ट्राभेलिंग	यूरोपविथकिड्स	पारिवारिक बिदा	बच्चाहरु	रेल यात्रा	Travelingwithkids	चिडिया घर